I-Samsung Odyssey G7: Ukuqapha okuphelele kakhulu kwemidlalo | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 21/04/2021 18:00 | General, Izibuyekezo
Ekupheleni konyaka odlule inkampani yaseNingizimu Korea yethule uchungechunge lwemikhiqizo yokudlala futhi ikakhulukazi uhla I-Odyssey, izikrini zale njongo ifemu echaza abasebenzisi ukuthi bathole okuningi emidlalweni yabo yevidiyo.
Ngalesi sikhathi sinetafula lokuhlola okusha I-Samsung Oddysey G7, isilawuli esigobele esiphakeme esenzelwe ngokukhethekile ukugembula. Thola nathi ukuhlaziywa okujulile futhi wazi ukuthi kukufanele kangakanani ukuthenga kwakho. Sikutshela lokho esikucabangayo nokuthi ube yini umphumela wokugcina wokuhlaziywa kwethu.
1 Idizayini nezinto zokwakha: Ukuhlose "amageyimu"
2 Izici zobuchwepheshe bePhaneli
3 Ukucushwa nokuxhuma
4 Sebenzisa isipiliyoni nokulinganisa
Idizayini nezinto zokwakha: Ukuhlose "amageyimu"
Ngokwethembeka, umkhuba wokwengeza ama-RGB LED amaningi kuyo yonke into ehlose ukuba "yimidlalo" yinto engangifaneli ikakhulukazi, ngithanda ukwakheka okunengqondo. Kodwa-ke, abakwaSamsung bakwazile ukuqinisa lo mbono ngaphandle kokushayisana ngokweqile futhi lokho kusimangalise kakhulu. Siqala ukucabangela esinye sezici ezahlukaniswe kakhulu, ijika le-1000-millimeter okuyinkulumo ephezulu ngokuya ngabaqaphi abagobile. Lokhu kungezwe ekwehlisweni kohlaka nohlangothi oluphezulu kanye nedizayini enolaka ezansi, efakwe izikrini ezimbili ze-RGB LED ekugcineni ngakunye.
Isisindo inani: 6,5 Kg
Ubukhulu ukuqina kwesisekelo: 710.1 x 594.5 x 305.9 mm
Odongeni lwangemuva sinokusekelwa okwakhiwe kahle okunomdlulisi wekhebula, futhi iringi ye-RGB LED isikhathi esisodwa, lokho kunomphetho ozofiphaza ukukhanya. Lokhu kuzofiphala kuzo zonke izimo futhi kuqapheleke kakhulu lapho sikhuluma ngokukusebenzisa ngokuphelele ebumnyameni, kuzoba njalo lapho kuzobonakala khona odongeni. Isisekelo sishintsha ukuphakama size sifike kumasentimitha ayi-120 futhi singa: sitsheke phakathi kuka - 9º no + 13º, sizungezise - 15º kanye + 15º kanye ne-pivot phakathi kuka -2º no + 92º. Ukuqapha kwakhiwe ngokuyinhloko ngopulasitiki omnyama ophothulwe ngensimbi ukuqina.
Izici zobuchwepheshe bePhaneli
Siqala, ngokusobala, ngephaneli yokuqapha okungenzeka ukuthi ibaluleke kakhulu phakathi kwezinto eziningi kangaka. Sinohlobo lwe Iphaneli ye-VA engu-31,5-intshi nge 16: 9 ukubukeka kwesilinganiselo ejwayelekile kakhulu. Le phaneli ye-VA nedizayini yayo egobile ngokwedlulele iyenza ithokozelwe kuphela ngobukhazikhazi bayo obukhulu lapho sizibeka kahle phambi kwayo, kufanele sikhohlwe ngokuyisebenzisa kusuka embhedeni noma ezindaweni ezingahambelani ngqo nendawo. Kuleli qapha, i-Samsung ikhethe i-QLED, ubuchwepheshe obuzuze impumelelo eningi kakhulu.
Ukulungiswa komdabu kokuqapha kungamaphikseli angama-2560 x 1440, Lokho akukubi nakancane ukukwazi ukujabulela imidlalo ye-PC yesizukulwane esilandelayo, kanye nokuhambisana ngokuphelele namadivayisi afana ne-PlayStation 5. Ngalesi sikhathi sinokukhanya okuphakathi kwama-350 cd / m2 enesilinganiso esingu-600 cd / m2 ezindaweni ezithile. Isilinganiso sokuqhathaniswa sifinyelela ku-2.500: 1 ukuthi asithandi kakhulu, yebo, ukuvumelanisa kwephaneli kuzohambisana nakho Ukuhambisana kwe-NVIDIA G-Sync ne-AMD FreeSync.
Ububanzi obunamandla obunikezayo, esimweni sakho i-HDR600 Kumele kuthiwe asikutholanga sishaya ngokweqile futhi. Izinga lokuvuselela, yebo, liphezulu kakhulu emakethe ngaphandle kokudlula ngokweqile, lifinyelela ku-240 Hz. Ngakolunye uhlangothi, ngo-240 Hz singayisebenzisa kuphela ngokujula kombala wezingcezu eziyi-8, kuzofanele sehlele ku-144 Hz enesizotha ukuze sijabulele iphaneli le-10-bit. Ngokolunye uhlangothi.
Lokhu kuqapha kune- uhlelo oludidiyelwe lwesoftware ezosetshenziswa ngenduku yokudlala ezansi. Kuyo sizothola izilungiselelo zombili ezingeni lokuxhuma nokulungiswa, yize kungabonakali kunembile ngokweqile. Singakwazi ukusingatha izingqinamba zamanani wokuvuselela phakathi kwabanye. Kuyo sizobona ngesikhathi sangempela i- "impu-tlag" okuthi noma kunjalo ihlale iqinile ku-1ms okungenani ezivivinyweni zethu.
Ukuqhubekela phambili ekuxhumekeni, sizothola amachweba amabili osayizi ojwayelekile we-USB 3.0, itheku lendabuko le-USB Hub uma kungenzeka sifune ukufaka uhlobo oluthile lokungeza okuthakazelisa kakhudlwana, kanye namachweba amabili e-DisplayPort 1.4 kanye ne-HDMI 2.0 port. Ngeke uphuthelwe noma yini, ngaphandle kokuthi ufuna umsindo, uzoba nokukhishwa kwehedfoni kepha ukhohlwe ngezipika. Ngemininingwane engaphezulu, Ngokufaka imbobo ye-HDMI kuphela singathola ngisho ne-snag lapho sifaka ibha yomsindo ukuthuthukisa ulwazi lwethu jikelele.
Sebenzisa isipiliyoni nokulinganisa
Ngokuthile okuqine kakhulu sihlala sinokunambitheka okumnandi. Kulokhu ukugoba kwayo okuphakeme ukuthanda noma ukuzonda. Ijika le-1000R kumqapha onjalo linengqondo kakhulu, yize kungekho noyedwa obekuhlolile kuze kube manje. Lesi sikrini sisimboza ngokuphelele futhi sithatha inkundla yethu ebonakalayo, lokhu kunenzuzo ecacile ngaphezu kokudlala. Umbono wokuqala ngemuva kokuxhumana okokuqala nomqaphi ungokumangala kwangempela, akunakwenzeka ukuthi ungamangali.
Usheshe uyijwayele, ikakhulukazi uma uzoyisebenzisela ukudlala kuphela. Lapho uhlela ukusebenza naye, izinto ziyashintsha, futhi kuba njalo Ngalesi sizathu, ingezwe ekugobekeni kwayo okunamandla, kuyinto yokuqapha engenakuguqulwa, eyenzelwe inhloso yayo, «ukudlala». Ukucwiliswa kuphelele, kepha kuklanyelwe kuphela futhi kuphela umphakathi wegeyimu. Kodwa-ke, ukuba neziqaphi ezimbili zalolu sayizi kudeskithophu kubonakala kunzima, ngakho-ke kufanele ucacise ngentengo okufanele uyikhokhe lapho uthatha isinqumo sokuyisebenzisela ezinye izinhloso, ngoba ukubukela ama-movie endaweni yomdlalo kungahle kungabi mnandi kakhulu.
Ngenkathi sisaqhubeka nokuhlaziya, siqinisekisile ukuthi abakwaSamsung bakhiphe isibuyekezo se-firmware sokuqapha, lokhu kufakwe kalula kakhulu kunoma yimaphi amachweba we-USB futhi kunikeza uphawu oluhle lokusekelwa enakho ngemuva. Kodwa-ke, intengo iyahlanya ngempela, itholakala kuphela kulabo abafuna ukusebenzisa amandla abo ngokugcwele kulokhu,I-Samsung G7 (C32G73TQSU) ...
Lokhu kube ukuhlaziywa kwethu okujulile kwe-Samsung's Odyssey G7, isilawuli esigobile kakhulu futhi esinamandla ngokwedlulele kubadlali abaningi, khumbula ukuthi ungasishiya nemibuzo ebhokisini lokuphawula.
Kuthunyelwe ku: 21 Apreli 2021
Ukulungiswa kokugcina: 18 Apreli 2021
Ijika elinamandla kakhulu
Ukuhambisana okuphezulu nezinga elihle lokuvuselela
Ukwesekwa kwezobuchwepheshe nokuklama okuhle
Amachweba amaningi amaningi alahlekile
Intengo ongafinyelela kuyo abambalwa
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Samsung Odyssey G7: Ukuqapha okuphelele kakhulu kwemidlalo